Mnangagwa To Ease Covid-19 Lockdown Regulations Next Week - iHarare News `); });
Last updated on September 19th, 2020 at 05:59 pm
President Emmerson Mnangagwa has stated that the Government of Zimbabwe will ease Zimbabwe’s national COVID-19 lockdown regulations.
Hapana anoraramira hupenyu hweumwe. Mumwe nemumwe anofa pachake kana kurarama pachake. Isu ndima yedu yekuudza vanhu kuti kune chirwere ichi taifambisa, taisunda ndima iyoyo. Kwatavakuenda uku, tichionazve kuti vazhinji vakunzwisisa, takutsudzunura zvishoma nezvishoma. Tichange tichitsidzunura zvimwe svondo rinouya iri. Saka ndati ndinyatsokutsanagura apa kuitira kuti tese tive nerimwe kana totaura. (No one lives on behalf of another. An individual will die or live alone. We have done our part as Government to inform the public on Covid-19. We will be relaxing regulations this coming week. I have told you this so that we are on the same page.)
Zimbabwe is gradually opening the economy with Air Zimbabwe set to resume flights next week.
Emmerson MnangagwaMnangagwa To Ease Covid-19 Lockdown RegulationsZimbabwe Covid-19 Lockdown